Paul Pogba Uhuhuro Hwehuduku Plus Untold Biography Facts
Pedro Neto Kuberekwa Nhau Plus Untold Biography Facts
Emiliano Martinez Childhood Nhau Uye Untold Biography Chokwadi
musha EUROPEAN FOOTBALL STORies Vatambi vechiFrench Vanotamba Paul Pogba Uhuhuro Hwehuduku Plus Untold Biography Facts
Yedu Paul Pogba Biography inopa yakazara yakazara yeChinyorwa Chake Chemwana, Hupenyu hwepakutanga, Vabereki, Chokwadi chemhuri, Mukadzi, Vana, Hupenyu hwePamoyo uye Mararamiro. Mune mazwi akareruka, isu tinokupa iwe kuongororwa kwakazara kwehupenyu Hwake Nyaya, kutanga kubva pamazuva ekutanga aPogba kusvika paakazova Mukurumbira.
Hongu, munhu wose anoziva nezvemusoro wake unoshamisa uye ane simba rinokuvadza asi vane vashomanana vanofunga nezvePaul Pogba's Bio iyo inonakidza chaizvo. Iye zvino pasina kunze kwekuita, ngatitangei.
Paul Pogba Nyaya dzeChidiki:
Pauro Rakabhi Pogba akaberekwa pa 15th yaMarch 1993 pa Lagny-Sur-Marne, France. Akaberekerwa amai vake veCongo, Yeo Moriba uye baba vake veGuinean, Fassou Antoine avo vose vakatamira kuFrance vachitsvaka mafuro akaoma mukati mekutanga kwe1990s.
Pogba akapiwa kuberekwa mwedzi mitanhatu mushure mokunge vabereki vake vatamira kuFrance, chiitiko chakachengetedza kugara kwavo zvachose munyika. Asati aberekwa naPoorg Pogba, Yeo (Amai vaPogba) vaiva nemapatya ainzi Florentin naMatias (vakoma vaPaul Pogba) vakasara mu Conakry, Guinea (nyika yavo yeAfrica muAfrica) mushure mekunge vabereki vavo vadzokera kuFrance vasati vauya nemhuri yavo muFrance makore akazotevera.
Paul Pogba Mhuri Yechokwadi:
Paul Pogba anobva kuimba ye 'Testosterone', imba inotungamirirwa nevarume. Fassou Antonie Pogba (baba vaPoorg Pogba) murume anozvininipisa uye ane rugare. Haana kuita zvakawanda mubhizimusi romwanakomana wake (Football) uye Paul Pogba ane makore apfuura akakundikana kusimbisa ushamwari hwepedyo naye. Zvisinei, Pogba anowedzera ukama hwakasimba naamai vake.
Pamusoro paamai vaPaul Pogba:
Amai vaPaul Pogba (Yeo Moriba Pogba) ibhizimisi bhizinesi shure kwebhokisi rinodhura zvikuru munyika. Izvi zvinodada 'supermum' (inoratidzika pasi apa) yakabatsira kumutsa vana vake vatatu vakakurira kuva vadzidzisi vematambo.
Ukama hwake nemwanakomana wake wokupedzisira 'Paul Pogba' yakange yakanakira kubva pakutanga. Akavimbisa kuti ainakidzwa nekuve mwana wake wekupedzisira akaberekwa uye akamunamata uye akamubata. Nenguva pfupi, akamubata zvakasiyana nezvimwe vanakomana vake.
Nezvehama dzaPaul Pogba:
Vabati venhabvu vakuru hama (Mathias uye Florentin) nguva dzose 'ane musana wake'. ivo vanovimbisawo kuti mukoma wavo wemwana (panguva iyoyo) anotora nzvimbo yepamusoro yezviitiko sezvinoonekwa mumufananidzo uri pasi apa.
Paul Pogba's Biography- Makore Ekutanga Nhabvu:
Paul Pogba akatanga basa rake rebhora pazera remakore matanhatu achitamba US Roissy-en-Brie, kambani yebhola raive makiromita mashoma kumaodzanyemba kwekumusha kwake.
Akapedza nguva dzechinomwe pachikwata asati adzokera kuUnited States Torcy, kwaakashanda semutungamiri weboka iri pasi pe-13 team.
Hazvina kutora nguva refu asati apinda mune inozivikanwa Le Havre academy seane makore gumi nematatu uye airatidzira zvinonakidza zvinoonekwa izvo zvakabata pfungwa dzemakuru eEurope makirabhu sezvaakafambira kuburikidza nemazera emakore.
Paul Pogba's Biography- Nzira yekuenda Mukurumbira Nyaya:
Pogba paakazivisa kuti ajoinha United muna2009, Le Havre yakashamisika uye vakapomera Red Devils yekupa "Guru kwazvo" zvikamu zvemari - uye imba - kuvabereki vaPogba kugumisa chibvumirano chiripo kare kare.
Le Havre vakaona kusagadzikana kusina kubvumirana uye kusingazivikanwi kwekambani yebato rekutsvaga nekusunungura chirevo chekutaura mherechedzo yavo.
"Panguva apo mapato akawanda ari kutaura zvinopesana ne 'kutengesa kwevana vaduku', Manchester United haina kuzeza kubvisa mwana weCX ane makore gumi nemana."
Zvisinei, Manchester United yakasunungurwa chero chakaipa chipi nechipi neFIFA neLe Havre vakasarudza kusafambisa asi vakatsika nzira dzechibvumirano nekusvika chibvumirano neRed Devils.
Paul Pogba akapedza makore ekupedzisira e2 ohuduku hwake neManchester United kubva ku2009 kusvika ku2011. Yaiva paUn iyo Pogba yakasangana ikaita Jesse Lingard shamwari yake yepamwoyo. Jesse (akafananidzirwa pasi apa nePogba) akaita basa rake rose revechidiki neManchester United kubvira mugore ra 2000-2011.
Paul Pogba's Biography- Rise kune Mukurumbira Nyaya:
Pogba akagara kwemakore matatu muUnitedral asati asina nguva yekutamba yakakurudzira kuenda kuJuventus, kambani yakabatsira kukunda mazita mana anotevera anotevera Serie A, uyewo nhamba dzeCoppa Italia uye Supercoppa Italian mazita.
Vashandi vake vakagadzirisa kudzoka kwake kuManchester United nekuda kwekambani yekodhi mari ye £ 89.3 Million Pounds mu2016. Makore maviri gare gare, akava chikamu chevarume ve23 Chikwata cheFrance izvo zvakakunda 2018 World Cup muRussia. Vamwe vose, sezvavanotaura, inhoroondo.
Paul Pogba Nyaya YeRudo:
Paul Pogba haasi wekunyadzisa kusangana nemadzimai akanaka, chokwadi chinoratidzwa mukusarudza kwake kwekutora ngoro yakaisvonaka kana musikana iyo inofamba nezita Maria Salaues.
Maria Salaues muenzaniso webasa rake rinowanikwa kuMiami, ruzivo runoita kuti zvive nyore kwaari kuti ashanyire tsitsi dzake muManchester. Kunyange zvazvo ukama hwaPogba nemuBolivia wemakore gumi nemana weHNUMX hwave huchichengetedzwa pamusana padziviriro, doo akaita mhando dzakawanda dzinofanirwa dzinoratidza huwandu hwavakawana mumutambo wavo worudo.
Kubuda kwepakutanga pamusana pekufambidzana kwavo kwepamberi kwakange kuri mu2017 pavakatanga kuonekwa pamwechete. Kufambira mberi kwaJune 2018 Maria Salaues akaonekwa kuti akafuka izvo zvinoita sechindori chekubatanidza sezvo akagara pachigaro paamai vaPogba kuMuzinda weLuzzhniki kuMoscow munguva yemutambo weFrance Cup neDenmark.
Paul Pogba Midzi Yemhuri- Ropa Resimba:
Paul Pogba's stant stature is threat for every opposition player. Kuzvimiririra kwake maererano nevatsvakurudzi kune midzi yemadzitateguru inoenderana nemhando dzevanhu vemitambo vemauto vakadai seAmerica Kobe Bryant uyo anouya kubva muropa remvura. Paul Pogba akasimba, physic-like physic uye simba retarenda rake zvakamuita kuti ave nechepakati pakati pezera.
Kuzvipira kwake pakuzadzisa zvaanogona kuita hazvizivikanwe uye hakusi kukurumidza kuitwa. Akashandisa pachake wake physiotherapist uye mhuka yemhuka kubva paanobva kuFrance pazera re16. His physiotherapist uye mufudzi anoziva kuti anonyatsocherechedza mushure memitambo uye anochengetedza maitiro akaoma munguva dzekusiya-nguva.
Paul Pogba Hupenyu hwega- Off-Pitch Mabasa:
Paul Pogba anoita izvi zvakaoma kudzidzira kuvandudza simba rake rekupfura kwenguva refu uye kumubatsira mukuvandudza unyanzvi hwake hwekuchenjera uye hupenyu. Unyanzvi hwake hwokutsvaga hunoratidza kuti akagadzirira sei kutarisana nekutyisidzira munzira yake.
"Ani naani ari kuedza kunditsamwisa angave ari kushamiswa kunoshamisa"
Paul Pogba Uhuhuro Hwehuduku Plus Untold Biography Facts-Dance Moves
Pogba yakagamuchira vateereri vane matanho akawanda emudhanzi ayo yaanoshandisa kumitambo chero nguva yaanoverenga. Paul Pogba anoonekwa pasi apa achiita mutsva wekutamba pamwe neaanodzidza naye Jesse Lingard.
Rwiyo rwakaitwa nedoo rwaive rwakaimbwa naAimbova muenzi weNigeria akaberekwa, Wizkid.
Paul Pogba's Biography- Nyika Dzepasi Pese Enyanzvi
Pogba hauna kuputira muboka reFrance riri kure. Akatanga kuonekwa kwake kuLes Bleus kubva muU16 kusvika kuU20 'Espoirs' squad.
Nguva yake yakanakisisa yakauya mu2013 apo yaitungamirira France kuzozvirumbidza paU20 World Cup. Mutambi wacho akawana rutivi rwacho, akatendeuka chirango mukupfura kwekupedzisira kurwisana neUruguay uye akatumidzwa kuti mutambi wechikwata.
Paul Pogba akakundawo Addidas Golden Ball mupiro weFIFA U-20 World Cup Final pakati peFrance neUruguay kuAli Sami Yen Arena munaJuly 13, 2013, muIstanbul, Turkey.
Paul Pogba Vanun'una Boka Renhabvu Mitauro:
Maizviziva here?… Vakuru veFrench mashura Florentin Pogba uye Mathias Pogba vose vari mavheti uye mapatya akafanana.
Paul Pogba's Elder Brothers (Twese Twins) - Florentin Pogba (Kuruboshwe) naMatas Pogba (Kurudyi)
Ivo vose vakazvarwa muGuinea. Florentin Pogba (inoratidzirwa yakasara ndiye mutungamiriri wekuGuinea iye zvino) sapanguva yekunyora.
About Vabereki vaPaul Pogba:
Sezvambotaurwa kare, baba vaPogba ndiGuinean apo mai vake vari vokuKongo. Vose vane ukama hwakanaka nemwanakomana wavo. Zvisinei, amai vaPoorg Pogba vave vaineye pane imwe nhanho yekubudirira kwake. Baba vanonzwa vakasununguka nekuchengeta zvakaderera uye vasingabatanidzi mumabasa evanakomana vake.
Amai vaPaul Pogba naBaba
Pane imwe nguva, Manchester United yakapa £ 85,000 mumwe nomumwe kuvabereki vose vaviri kuti vawane woo mwanakomana wavo (Paul Pogba) kuti agare navo mu2009. Fembera chii?. Vose vakagamuchira mari yacho. Izvi zvakaona kupona kwemwanakomana wavo kuManchester United.
Biology yaPaul Pogba- Kusvirwa naamai Vake Vanochinja:
Anowanzoti 'The Supermum neBusiness business tycoon iyo yakashandura mwanakomana wayo Paul Pogba mumamiriyoni emadhora emadhora pasina nguva.
Mai Yeo Moriba vanopupurirwa kuva mwanakomana wavo mumiririri, mutungamiri uye mutungamiri. Anotambawo zvakafanana kune mamwe mababa maviri (Florentin naMatas) maviri eGuinea munyika dzakawanda.
Akamira ipapo kwaari pasinei nekumanikidzwa kwaAlex Ferguson achimugombedzera kuti aite mwanakomana wake agare pachikwata. Paakabvunzwa pamusoro pokusangana kwake naFerguson, Yeo Moriba akaseka sezvaaifunga nezveimwe yezviratidzo zvake zvakanyanya neAty-Man uyo anotya aakambotarisana nehupenyu hwomwanakomana wake Paul Pogba.
"Apo Ferguson achisvika kumba kwangu ... ndinova nechokwadi kuti anosiya akaora mwoyo. Ndaigara ndichimuudza, mwanakomana wangu Pauro haazoregi zvakare. Somugumisiro weizvi, Ferguson akamusundira, haana kumutamba, Mucheche wangu Pauro akanga ari oga. Akatochema muhofisi yeFerguson pamusoro pemabatiro aaiitaed. Paul Pogba wakatsamwa izvozvo Paul Scholes akadzoka kubva pamwedzi mitanhatu yekurasikirwa munaJanuary 2012 kununura nzvimbo yeMiddlefield iyo yaakatarira. Chero 18 panguva iyoyo uye pamwe chete nevamwe vanoverengeka vanoita zita rake muLigi Cup, Pogba akanzwa kuti anofanira kupiwa mukana wake. Izvi zvakaitwa mwanakomana wangu akatsunga kusiya chikwata ".
Akaenderera mberi ...
Pasinei nematambudziko edu ose, chishamiso chakaramba chichiitika. Mwanakomana wangu akazova pakarepo kuJuffus. Mazuva ano iwe unofanirwa kutaura kuti ndinoziva zvishoma nezvebhola, ndingangova amai vanozvarwa asi hapana munhu anokwanisa-kundipenga mubhizimisi rino, "
Amai Yeo Moriba Pogba vachiri kuramba kuti ndiye ari kutungamirira basa rehurumende semutungamiriri wemwanakomana wavo. Maererano naye;
"Ndiri kungokumbira mazano, ndizvo zvese. Pauro anoremekedza ini, anoteerera zvose zvandinomuudza. "
Biology yaPaul Pogba- Feud naAlex Ferguson
Munguva dzake dzakaodza mwoyo paMan United United, Paul Pogba aizivikanwa nekuda kwemazwi;
'Ndinosarudza DIE pane kutamba mutambo'.
Haatyi. Anosunungura paanenge asisina mukana waanofanirwa. Akanga ari mumwe wevatambi vashoma vasina kutya vakanga vane mabhora kuti vaende kundodzidzisa Sir Alex Ferguson kuti ataure;
'' Changamire, ndinofunga kuti ndakanga ndakwana, Nditeerere, uye ini ndichakuratidza kana ndakagadzirira kana kwete ''.
Muvhidhiyo iri pasi apa, Paul Pogba anopomera Manchester United "Kusaremekedza", achireva kuti akaitwa kuti adzidzise ari oga panguva yebvumirano yake yepambano yakatangira kuenda kuJudventus, 'mukadzi wekare '.
Chitendero chaPaul Pogba:
IFrench Powerhouse ndeyekuita chiMuslim nekutenda. Anowanzoonekwa achidudza minyengetero mipfupi pamberi pemitambo.
Rudo rwaPauro Pogba nokuda kweIslam.
Pasinei nokuva mutambi wenhabvu, Paul Pogba ane tsika yakasimba yeIslam kubva panzvimbo yacho. Anotevera uye anoremekedza tsika dzeArab.
Paul Pogba's Nickname- Nei achibereka 'The Octopus':
Kune vazhinji vakatarisa Pogba nzira yose, mumwe aizotarisa imwe yakawedzera yakareba yakareba makumbo uye simba rechisiye iro raanoshandisa nhasi mukurwisa nekudzivirira.
Maso ake e6.3 akasungirirwa uye akarembera mitezo anoyemurwa navazhinji vatevedzeri vebhola. Ndicho chikonzero nei vatsvaki nicked vakamutumidza ("Paul the Octopus"). Iri zita rakauya somugumisiro wemakumbo ake akareba uye akajeka. Vafanendi vanotenda makumbo ake akafanana nematende e octopus apo iye anotarisana, anomhanyira, anodonha uye otora bundu refu.
Vakoma vakuru vePogba vanosarudza kumudana kuti 'Pogboom'kuburikidza nekuedza kwake kwenguva yakareba pamusangano. Iri ndiro zita rezita rakanyorerwa pamabhuti ake.
Kwayakatangira Nickname yaPaul Pogba:
Zita rokuti 'Paul the Octopus'yakabva kuEctopus anozivikanwa uyo aishandiswa kufanotaura mitambo munguva yeClomb World Cup. Paul (Iye zvino Zuva Rokutanga uye Rumure kuti akaurawa neWorld Sports Betting Billionaire VaMiti) akabudirira akafanotaura pasi yenhabvu yemitambo yebhola. Nokuda kwaPauro, kuvimba nebhokisi kunoreva kuti nyika ichatora mutsara unotevera.
Paul Pogba's Biography- LifeBogger Rankings
Izvo zvakakodzera kutaura kuti mutambi akaita saPoorg Pogba anomiririra mukana mukuru webhodhi yenyika. haisi kungoita mutsvuku uye kupfeka kupfeka pfungwa, asi maitiro ake emutambo anoita kuti ave mudiwa kune chizvarwa cheFIFA-Vine. Tsvaga pasi, Paul Pogba's rankings's rankings.
Nyasha yekuverenga Pauro Pogba Childhood Indaba pamwe untold biography chokwadi. At LifeBogger, tinoedza kururamisa uye kusaruramisira. Kana ukaona chimwe chinhu chisingatarisi zvakanaka munyaya ino, chinyorwa iwe taura nesu!.
Brandon Williams Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
Eric Cantona Mwana Wechidiki Nhau Uye Untold Biography Chokwadi
Mason Greenwood Yemwana Nhau uye Untold Biography Chokwadi
Aaron Wan-Bissaka Utano Nhau Plus Untold Biography Facts
Bruno Fernandes Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts
Daniel James Child Child Story Plus Untold Biography Facts
Yakagadziridzwa zuva: Gunyana 16, 2020
Yakagadziridzwa zuva: Gunyana 13, 2020
Yakagadziridzwa zuva: Gunyana 10, 2020
Antonio Conte Utano Hwokutanga Plus Untold Biography Facts
Victor Lindelof Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts
Dhani Anopa Vana Vechiitiko Nhau Untold Biography Facts
Michael Owen Utano Nhau Plus Untold Biography Facts